ပြခန်းအခမဲ့ဒေါင်းလုပ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဓါတ်ပုံပညာ Apps ကပ » ပြတိုက်
ပြခန်း APK ကို
ပြခန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ HD ကိုဓာတ်ပုံပြခန်းဒါသင်၏ဓါတ်ပုံများ Password ကို-protect, စတိုင်ဒီဇိုင်း, အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, လွယ်ကူသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံ collage နှင့်သတ်မှတ်ထားစမတ်အယ်လ်ဘမ်အမျိုးအစားရှိပြီး၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ပြခန်းကစမတ်ဓာတ်ပုံပြခန်း, format ကိုပြခန်း, စုဆောင်းခြင်းပြခန်းဖြစ်ပါသည်, သင်၏ဓါတ်ပုံများစည်းရုံးရေးများအတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့, feature ပြည့်စုံ App ဖြစ်ပါတယ်။
ပြခန်းဓါတ်ပုံကိုအမြင်တဓာတ်ပုံပြင်ဆင်ရန်နှင့်ဓာတ်ပုံ collage ထုတ်လုပ်သူ app ထဲမှာအားလုံးအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုရောက်စေနိုင်ပါတယ်ရမယ်!
ပြခန်းသင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံ, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်လူမှုရေးကွန်ရက်များမှတဆင့်သူတို့ကိုလျှော-ပြပွဲစတိုင်, ဝေစုဓါတ်ပုံကိုပြသနိုင်ပါတယ်။HD ကိုအရည်အသွေး & မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်: လူတိုင်းချင်အဖြစ်တစ်ခုအားသင် HD ကိုအရည်အသွေးကို၌သင်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုခံစားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံပြခန်းထိုအချိန်အတောအတွင်းအတွက်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်ကြိုးပမ်း။ ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်အတှေ့အကွုံအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးအန်းဒရွိုက် 8.0 စနစ်အဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါသည်!စမတ်အယ်လ်ဘမ် Category:: သင်, သင့်အကြိုက်ဆုံးရှုမြင်သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုများစုဆောင်းခြင်း watch, လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ Collage ယူ. ပိုမိုအဆင်ပြေတဦးတည်းပြခန်းအတွက်တည်နေရာနှင့်အတူဓာတ်ပုံများမှတ်တမ်းတင်နိုင်အောင် HD ကိုဓာတ်ပုံပြခန်းစမတ်အယ်လ်ဘမ်အမျိုးအစားထားကြ၏။ သငျတို့သမျိုးစုံနည်းလမ်းတွေဖြင့်သင့်စိတ်ကြိုက်အယ်လ်ဘမ် sort နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။
ဘေးကင်းလုံခြုံစာဝှက်အယ်လ်ဘမ်: သင်စကားဝှက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်လုံခြုံလမ်းအတွက်သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့စာဝှက်ထားတဲ့အယ်လ်ဘမ်အတွက်သင့် privacy စေနိုင်သည်။
စတိုင်ဒီဇိုင်း & အရောင်အသွေးစုံသောရေခွံ: အဆိုပါဓာတ်ပုံကိုပြခန်းတခုလန်းဆန်း UI ကိုခြောက်ထောင်လှပသောအရေခွံနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သင်သည်သင်၏သီးသန့်ဓာတ်ပုံကိုပြခန်းလုပ်သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
အစွမ်းထက်ဓာတ်ပုံ Editor ကို: အော်တို optimization အခမဲ့ချုံ့, စတိုင် filter များ, မျိုးစုံညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်းတွေ, ခေတ်သစ် mosaic နှင့် Doodle ဤအစွမ်းထက် photo-editing features တွေအဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတည်းဖြတ်သူအပေါင်းတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
Excellent ကဓာတ်ပုံကိုဆက်တင်: နှစ်ဦးပေါင်းစပ်ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းနည်းလမ်းများနှင့်သင့်မျက်နှာပြင်-ချွေတာအဖြစ်အေးမြဆလိုက်ရှိုးသင်ပြခန်းအသုံးပြုနေသည်အခါ, ကအချို့ကိုသင်အံ့အားသင့်အားငါပေးမည်ရမည်ဖြစ်သည်။ တဖန်သင်တို့လည်းသင်၏ဓါတ်ပုံများ, အမည်ပြောင်းရွှေ့နှင့် copy, set သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေကတဆင့်သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေနိုင်ပါသည်။
ပြခန်းတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း, အလင်း, သင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုစီမံခန့်ခွဲ Smart နိုင်သည့်ပုဂ္ဂလိကနှင့်ခေတ်သစ်ဓာတ်ပုံ gallery ပါ! သင်သည်သင်၏ဓာတ်ပုံများ & ဗီဒီယိုများစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် app ကို HD ကိုဓာတ်ပုံပြခန်းခံစားနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်! မည်သည့်ပြဿနာတည်ရှိခဲ့လျှင်ကိုတုန့်ပြန်ချက်မှအခမဲ့ခံစား!
ပိုမိုတည်ငြိမ် & ပိုမြန်, စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းအောင်
သုံးစွဲဖို့ကပိုလွယ်ကူပါတယ်, တချို့အသစ်က UI ကိုအဆင်အပြင်ကိုအပ်ဒိတ်လုပ်
အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက် bug တွေကို fix
လေယာဉ်ပျက်ကျကိစ္စများနှင့်အချို့သောအသေးစား bug တွေကို fix
ထိရောက်မှုပိုမြန်ဓာတ်ပုံများ preview မှတိုးတက်
အင်္ဂါရပ်ကြည့်ရှု & ဖြတ်တောက်ဗီဒီယိုများ Add
ပိုပြီးစတိုင်အွန်လိုင်း collage တင်းပလိတ်များ Add
လေးအမျိုးအစားအယ်လ်ဘမ် layout ကို Add
အန်းဒရွိုက် 8.x system ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
mode ကိုကြည့်ရှုပိုပြီးအယ်လ်ဘမ် Add
photo-editing doodling, စတိုင် mosaic Add
3.52 ကို MB
အကြောင်းကိုအလားတူအကြောင်းအရာ Read ပြခန်း apk